Podcast 2x03 an'ny Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 ary maro hafa | Vaovao IPhone
Herinandro taorian'ny nahatongavan'ny iOS 9 dia maro amintsika no efa nanavao ny fitaovantsika. Mandinika ny vaovao izahay, ny fiheverana voalohany momba ny rafitra fiasa vaovao, manavao olana sy fanavaozana ny fampiharana izay nitranga mba hifanaraka amin'ny iOS 9 sy ny fanatsarana azy. WatchOS 2 aorian'ny fahatarana voalohany dia misy ihany koa izao ary efa havaozina ireo fampiharana ho an'ireo endriny vaovao. Izany rehetra izany sy ny maro hafa ao amin'ny podcast antsika ankehitriny.
Henoy ny »2 × 03: iOS 9, watchOS 2 ary maro hafa» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 03 an'ny Actualidad iPad: iOS 9, watchOS 2 ary maro hafa
inforlk dia hoy izy:
Mitsara OS iray ianao fa tsy azonao akory ny fomba fiasany, hoy aho izany indrindra noho ny fanehoan-kevitry ny Spotlight lag amin'ny iPhone 6 +. Tsy nijanona nieritreritra ianao fa raha vao tafapetraka ny OS dia mila manisy index ny fisie raha hikarohanao any aoriana? Tsy mamaritra ihany koa ianao raha natao tamin'ny OTA na iTunes ny fanavaozana. Ary tsy milaza na inona na inona momba ny fanatsarana multitasking ianao, ny bokotra miverina eo anelanelan'ny rindranasa fotsiny no itarainanao. Napetrako tamin'ny iPhone 6 + izany ary tsy hitako ny tara hafahafa.
Mamaly amin'ny inforlk
Efa nandramako tsirairay ny beta navoakan'i Apple ho an'ny iOS 9 hatramin'ny volana jona, ka fantatro izay lazaiko.
Mikasika izay lazainao momba ny fisoratana anarana rakitra dia azoko fa tamin'ny fotoana voalohany nametrahanao ny rafitra na nampiasa Spotlight ianao no nanao azy, saingy mitranga foana izany. Rehefa lasa ny fotoana sasany hatramin'ny nanampianao azy farany dia miverina indray izany, tsy mila novonoinao ilay fitaovana na naverinao indray. Ny processeur toa ny 8-bit A64 dia tokony ho afaka hanao ireo asa ireo nefa tsy hisavoritaka. Zavatra tsy maintsy vahan'i Apple izy io ary azo antoka fa hamaha izany amin'ny fanavaozana ho avy.
Ary naveriko manokana tao amin'ny bilaogy ad nauseam izay averiko foana, nanoro hevitra ny tsirairay aho mba hamerina amin'ny laoniny, ary efa imbetsaka aho no nilaza tao amin'ny podcast, angamba tsy tamin'ity fa tamin'ireny teo aloha.
iKorum dia hoy izy:
Ny tena atoro anao indrindra raha mitsambikina avy amin'ny iOS isa 7 ka hatramin'ny 8 ianao hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ary manaraka azy dia tsara kokoa ny miverina amin'ny laoniny. Saingy tsy misy lalàna voasoratra milaza izany koa ary raha tsy mpampiasa JailBreak ianao (izay raha afaka misintona olana ianao) dia tsy misy olana amin'ny fanavaozana mivantana.
Mamaly an'i iKorum
Google manatsara ny "Wallet" azy amin'ny iPhone sy iPad